Amandla Okumaketha Ngamunye | Martech Zone
NgoLwesibili, Septhemba 17, 2013 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 UKyle Christensen
Uyakhumbula lapho iNike yethula umkhankaso wayo weJust Do It It? INike ikwazile ukufeza ukuqwashisa okukhulu komkhiqizo kanye nesikali ngalesiqubulo esilula. Amabhodi wokukhangisa, i-TV, umsakazo, ukuphrinta… 'Just Do It' kanye ne-Nike swoosh yayikuyo yonke indawo. Impumelelo yalo mkhankaso incike kakhulu ekutheni bangaki abantu iNike abangathola ukubona nokuzwa lowo mlayezo. Le ndlela ethile isetshenziswe yimikhiqizo emikhulu kakhulu ngesikhathi sokumaketha okukhulu noma 'inkathi yomkhankaso' futhi ubukhulu becala yaxhumana nabathengi futhi yaqhuba ukuthengisa. Ukumaketha okuningi kwasebenza.
Shesha phambili cishe iminyaka engama-30, faka i-Intanethi, omakhalekhukhwini kanye nemithombo yezokuxhumana, futhi siphila esikhathini esihluke kakhulu. Isibonelo, abantu basebenzise $ 25 billion ekuthengeni okwenziwe ngamafoni namathebulethi ngo-2012 kuphela, Ama-imeyili angama-41% avulwa kumadivayisi eselula futhi umuntu ojwayelekile uchitha amahora ayisithupha ngenyanga ku-Facebook. Ubuchwepheshe beDijithali buhlangene nezimpilo zabathengi futhi ngenxa yalokho, abathengi bafuna okuningi ekuxhumaneni kwabo nemikhiqizo. Bafuna ukuzwa ngemikhiqizo esiteshini esifanele, ngesikhathi esifanele nangemiyalezo efanele. Ukusekela lokhu, a Ucwaningo lwamuva lwabathengi lwe-Responsys ithole okulandelayo:
Ukwanda kwesifiso sabathengi sokuba nobudlelwano bomuntu siqu nemikhiqizo ngokuqinisekile kuwushintshile umdlalo wabakhangisi. Kuthatha ubuchwepheshe obuyinkimbinkimbi nokukhangisa ngobuhlakani ukuthuthukisa ubudlelwano bamakhasimende besikhathi eside futhi kube nomthelela entweni ephambili. Namuhla, abathengisi badinga ukuletha okuhlangenwe nakho komuntu ngamunye kumakhasimende kuziteshi ezahlukahlukene zedijithali - futhi ngezinga elikhulu.
I-MetLife iyisibonelo esihle. Uma umthengi evakashela iWebhu ye-MetLife ukubuza ngenqubomgomo yomshuwalense, ekusithekeni, bangena ohlelweni olwenzelwe umuntu ngamunye olwenzelwe ukusiza umthengi aqedele inqubo eyinkimbinkimbi kaningi. Iqala kuwebhusayithi, kepha ingaqhubeka nge-imeyili, isibonisi kanye ne-SMS yezaziso nezicelo zokulandelela. Endleleni, imiyalezo yenziwe yaba ngeyakho kumongo othile womthengi ngamunye. Kwenziwe kahle, lolu hlelo luholela ekuhlangenwe nakho okuhle kwamakhasimende, ngenkathi kukhuthazwa umthengi ukuthi aqedele inqubo futhi abe yikhasimende leMetLife. Kwesinye isimo esinjalo ngeMetLife, lokhu kuqoqwa kwemiyalezo yokumaketha kuziteshi zedijithali bekunegculiseko lamakhasimende eliphakeme kunenqubo yendabuko, eqhutshwa yi-ejenti.
The I-Responsys Interact Marketing Cloud yakhelwe ukusiza abathengisi ukwenza lolu hlobo lwe-orchestration yezentengiso. Ipulatifomu igxile ngokuphelele kumakhasimende, ichaza kabusha indlela abathengisi abahamba phambili emhlabeni abaphatha ngayo ubudlelwano babo bedijithali futhi baletha ukumaketha okulungile kumakhasimende abo kuma-imeyili, iselula, ezenhlalo, izibonisi nakuwebhu. Futhi, inikezela ngamaqembu wokumaketha ngesisombululo esisodwa, esisebenzisanayo sokuhlela, ukwenza, nokwandisa nokuhlela izinhlelo zokumaketha ezisesiteji eziningi. I-Interact Marketing Cloud inika amandla abathengisi ukusebenzisa idatha yabo, indlela yabo, ukuletha imilayezo efaneleke kakhulu egcina amakhasimende ebandakanyekile futhi ethenga kuwo wonke umjikelezo wempilo.
Tags: brandimeyili Marketingmarketingimiyalezo yokumaketha. imeyiliukuzenzelaukumaketha kwe-imeyili okwenziwe ngezifisoimiyalezo eyenziwe yaba ngeyakhoizimpendulo
UKyle Christensen uyi-VP Yezokumaketha Komkhiqizo ku- Izimpendulo lapho enesibopho sokushayela isu lokumaketha lomkhiqizo nokubeka i-Responsys Interact Marketing Cloud. Muva nje, uChristensen ubenguMqondisi Omkhulu Wezokumakethwa Kwemikhiqizo Nokuphathwa kwaZuora, lapho ahole khona yonke imithwalo yemfanelo yokukhangisa nokuphathwa kwezicelo zayo ezivelele ze-Z-Billing kanye ne-Z-Payments. Ngaphambi kukaZuora, uChristensen wethule futhi wasebenzisa ukumaketha komkhiqizo kolayini abaningi bomkhiqizo weSalesforce.com, kufaka phakathi iService Cloud ne-Data.com.